यो कस्तो विकास ? सय रोपनीभन्दा बढी भर्खर रोपेको धान खेतमा डोजर ? - Gandak News
यो कस्तो विकास ? सय रोपनीभन्दा बढी भर्खर रोपेको धान खेतमा डोजर ?
गण्डक न्यूज द्वारा २० असार २०७६, शुक्रबार १२:४० मा प्रकाशित
खप्तडछान्ना गाउँपालिका ६ पाटादेवलको अगासे खेतमा बुधबार धमाधम रोपाइँ चलिरहेको थियो । हलिसारा (पहिलो रोपाइँ) गर्दा राम्रो उब्जनी हुने मान्यताका कारण एकै दिन अगासे खेतमा २० बढी परिवारको रोपाइँ हुँदै थियो । कोही खेत साउँदै (सम्याउँदै) थिए । कोही बेर्ना उखेल्दै थिए ।